SSM : Tsy mahalala fitoniana anaty fety ! -
AccueilRaharaham-pirenenaSSM : Tsy mahalala fitoniana anaty fety !
SSM : Tsy mahalala fitoniana anaty fety !
Taorian’ny fahatapahan’ny karaman’ireo mpiasam-panjakana maro dia efa nisy ny baiko amin’ny fandraisana andraikitra faran’izay haingana nomen’ ny Filoham-pirenena, ary taorian’izany no nanaovan’ny minisiteran’ ny Asa sy ny asa sosialy, ary ny minisiteran’ ny Vola sy ny tetibola fa ezahina ny hamerenana izany alohan’ny faran’ ny taona ho avy izao. Marihina fa tafiditra indrindra amin’ny fanadiovana ireo mpiasam-panjakana matoatoa ny anton’izao fanapahana izao, ary fitaovana avo lenta tamin’ny alalan’ny informatika no nahafahana nanatanteraka izany. Ireo fitaovana nampiasaina ireo moa, izay namoaka ny anaran’ireo olona miverin-droa, izany hoe mpiasam-panjakana any amin’ny ministera izay misy azy izy, saingy kosa mambra kabinetra amin’ny minisitera hafa, na andrim-panjakana hafa ka mandray tambin-karama. Ankoatra izay ihany koa, ireo izay tsy nahafeno ny antontan-taratasy rehetra nilaina amin’ny maha mpiasam-panjakana azy ireo feno. Na eo aza izay famerenana ny karaman’ireo mpiasam-panjakana tapaka izay, dia mbola mandeha hatrany ny fanadiovana, satria volam-bahoaka tokoa no lany raha tsy ara-dalàna ny maha mpiasam-panjakana manara-dalàna ny olona iray
Ankilany anefa dia misy ny manararaotra tanteraka ny fahatapahan’ny karaman’ny mpiasam-panjakana amin’ izao fotoana izao, satria fantatr’izy ireo tsara ny mety ho fanakorontanana maro aterak’izany tsy fandrasain-karama izany. Tsy iza no tiana holazaina eto fa ny SSM, izay miantso ireo tapaka karama rehetra, hitokona ary hanambatra ny hery. Fanararaotana tsotra izao ary feno ambadika politika tokoa ity fiantsoana ity, satria mazava ny efa fanazavana avy amin’ ny fanjakana fa ho haverina amin’ny laonina alohan ny faran’ny taona izay efa tapaka karama. Ny mahagaga anatin’ity sendika ity, dia tsy misy ny fihetsehan’izy ireo rehefa mila fanampiana ny mpiasa iray, ary mazava ihany koa ny fitsipika mifehy ny sendika fa tsy tokony hanao politika velively izy ireo. Nefa moa izany dia mazava ny herin’ny vola miaro fanakarontanana, izay kendren’ny mpaniraka ny sendika. Mahafantatra tsara ny tokoa hatao kosa anefa ireo mpiasa tsirairay, ka azo hinoana fa tsy hanaiky velively ho taritina amin’ ny lalana tsy tokony halehany.
Hery Rajaonarimampianina : “Velona ary manana ny maha izy azy ny tafika malagasy”